Xhasa Urhulumente KaThixo Kuphela Ngokunyanisekileyo | UBukumkani BukaThixo
Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo
ISAHLUKO 1 “Mabufike UBukumkani Bakho”
ISAHLUKO 2 UBukumkani Buyazalwa Ezulwini
ICANDELO 1 Inyaniso YoBukumkani​—Ukusasaza Inyaniso YeBhayibhile
ISAHLUKO 3 UYehova Utyhila Injongo Yakhe
ISAHLUKO 4 UYehova Uyaliphakamisa Igama Lakhe
ISAHLUKO 5 UKumkani Uzisa Ukukhanya NgoBukumkani
ICANDELO 2 Ukushumayela NgoBukumkani​​—Kushunyayelwa Iindaba Ezilungileyo Emhlabeni Wonke
ISAHLUKO 6 Abantu Abashumayelayo​​—Bazinikela Ngokuzithandela
ISAHLUKO 7 Iindlela Zokushumayela​—Kusetyenziswa Zonke Iindlela Zokuba Abantu Beve Isigidimi
ISAHLUKO 8 Izixhobo Zokushumayela​—Ukuvelisa Iincwadi Eziza Kusetyenziswa Kwintsimi Yehlabathi
ISAHLUKO 9 Imiphumo Yokushumayela​—“Amasimi . . . Amhlophe Ukuze Kuvunwe”
ICANDELO 3 Imilinganiselo YoBukumkani​—Ukufuna Ubulungisa BukaThixo
ISAHLUKO 10 UKumkani Ulungisa Aze Acoce Abantu Bakhe Ngokomoya
ISAHLUKO 11 Kulungiswa Indlela Yokuziphatha​—Ibonisa Ubungcwele BukaThixo
ISAHLUKO 12 Ukulungelelaniselwa Ukukhonza “UThixo Woxolo”
ICANDELO 4 Ukoyisa KoBukumkani​—Ukuzimisela Ngokusemthethweni Iindaba Ezilungileyo
ISAHLUKO 13 Abavakalisi BoBukumkani Baya Ezinkundleni
ISAHLUKO 14 Xhasa Urhulumente KaThixo Kuphela Ngokunyanisekileyo
ISAHLUKO 15 Silwela Ukunqula Ngokukhululekileyo
ICANDELO 5 Imfundo YoBukumkani​—Ukuqeqesha Abakhonzi BakaKumkani
ISAHLUKO 16 Sihlanganisana Ngenjongo Yokunqula
ISAHLUKO 17 Kuqeqeshwa Abashumayeli BoBukumkani
ICANDELO 6 Ukuxhasa UBukumkani​—Ukwakhela Ukunqula Nokunikela Ngezinto Zokunceda
ISAHLUKO 18 Indlela Imisebenzi YoBukumkani Exhaswa Ngayo Ngemali
ISAHLUKO 19 Umsebenzi Wokwakha Uzukisa UYehova
ISAHLUKO 20 Umsebenzi Wokunceda Abanye
ICANDELO 7 Izithembiso ZoBukumkani​—Zonke Izinto Zenziwa Ntsha
ISAHLUKO 21 UBukumkani BukaThixo Buphelisa Iintshaba Zabo
ISAHLUKO 22 UBukumkani Bufeza Intando KaThixo Emhlabeni
UBukumkani BukaThixo Buyalawula!
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLunda IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Xhasa Urhulumente KaThixo Kuphela Ngokunyanisekileyo
INJONGO YESI SAHLUKO
Ngenxa yokunyaniseka kuBukumkani, abantu bakaThixo bahlala bengeyonxalenye yehlabathi
1, 2. (a) Nguwuphi umgaqo abaphila ngawo abalandeli bakaYesu ukuza kuthi ga kulo mhla wethu? (b) Iintshaba zethu ziye zazama ukwenza ntoni, yaye oko kuphumele entwenini?
UYESU wema phambi koPilato, eyona jaji yamaYuda eyayisaziwa neyayinempembelelo enkulu, waza wayixelela umgaqo abaphila ngawo abalandeli bakhe bokwenyaniso ukuza kuthi ga kulo mhla wethu. Wathi: “Ubukumkani bam abuyonxalenye yeli hlabathi. Ukuba ubukumkani bam bebuyinxalenye yeli hlabathi, abalindi bam bebeya kulwa ukuze ndinganikelwa kumaYuda. Kodwa ubukumkani bam abusuki kulo mthombo.” (Yoh. 18:36) UPilato wavuma ukuba uYesu abulawe, kodwa olo loyiso lwaba lolwethutyana kuba uYesu wavuswa. Abalawuli boBukhosi baseRoma obunamandla bazama ukubathez’ amandla abalandeli bakaKristu, kodwa batsho phantsi. AmaKristu asisasaza isigidimi soBukumkani kuwo onke amazwe awayekho ngelo xesha.—Kol. 1:23.
2 Emva kokumiselwa koBukumkani ngo-1914, amanye amagunya asemkhosini adume ngokuba namandla aye azama ukubacima igama abantu bakaThixo. Kodwa onke atsho ancama. Xa kukho iingxwabangxwaba, oorhulumente abaninzi namanye amaqela ezopolitiko baye bazama ukusinyanzela ukuba sibe ngakwicala labo, bezama nokusahlula. Nabo abakhange baphumelele. Namhlanje, phantse kuzo zonke iintlanga ezisemhlabeni bakho abalawulwa bobu Bukumkani. Naxa kunjalo, simanyene njengabazalwana bokwenene abasehlabathini lonke, yaye asithath’ icala kwimicimbi yezopolitiko yeli hlabathi. Indlela esimanyene ngayo ibubungqina obungenakuphikiswa bokuba uBukumkani bukaThixo buyalawula, yaye uKumkani uYesu Kristu uyaqhubeka ebakhokela, ebacoca yaye ebakhusela abalawulwa bakhe. Khawubone indlela akwenze ngayo oku, uze ufunde ngoloyiso olomelez’ ukholo esibe nalo kwamanye amadabi aliwe ezinkundleni njengoko siqhubeka ‘singeyonxalenye yehlabathi.’—Yoh. 17:14.
Umbandela Oye Wabaluleka
3, 4. (a) Zintoni eziye zenzeka emva kokuzalwa koBukumkani? (b) Ngaba abantu bakaThixo babeyiqonda ngokupheleleyo into ekwakufuneka bayenze ukuze bangabandakanyeki konke konke kwimicimbi yezopolitiko? Cacisa.
3 Emva kokuzalwa koBukumkani, kwabakho imfazwe emazulwini waza uSathana waphoswa emhlabeni. (Funda iSityhilelo 12:7-10, 12.) Nalapha emhlabeni kwabakho imfazwe eyavavanya abantu bakaThixo. Babezimisele ukulandela umzekelo kaYesu wokungabi yinxalenye yehlabathi. Ekuqaleni babengayiqondi ngokupheleleyo into ekwakufuneka bayenze ukuze bangabandakanyeki konke konke kwimicimbi yezopolitiko.
4 Ngokomzekelo, uMqulu VI wencwadi ethi Millennial Dawn, * owapapashwa ngo-1904, wakhuthaza amaKristu ukuba angafaki sandla kwiimfazwe. Noko ke, le ncwadi yathi ukuba umKristu wayenyanzelwa ukuba abe semkhosini, wayefanele azame ukufumana umsebenzi ongazukumsa edabini. Ukuba ke wayethunyelwa edabini, wayefanele aqiniseke ukuba akabulali. Ethetha ngento eyayisenzeka ngelo xesha, uHerbert Senior, owayehlala eBritani nowabhaptizwa ngo-1905, wathi: “Abazalwana babedidekile yaye kwakungekho nto icacileyo enoba kwakungekho nto iphosakeleyo ngokuba lijoni kusini na, ukuba nje abayi edabini.”
5. IMboniselo kaSeptemba 1, 1915, yasenza saqonda ntoni?
5 IMboniselo kaSeptemba 1, 1915, yasenza sawuqonda kakuhle lo mba. Ithetha ngamacebiso akwiStudies in the Scriptures, yathi: “Siyazibuza enoba ukuba lijoni akuyi kuthetha ukuyekelela kwimigaqo yobuKristu.” Kodwa kuthekani ukuba umKristu ebesoyikiswa ngokuba uza kudutyulwa ukuba akavumi ukunxiba iimpahla zamajoni nokuya emkhosini? Eli nqaku lathi: “Yiyiphi eyona nto ibiya kuba bhetele? Kukudutyulwa ngenxa yokunyaniseka kwiNkosana Yoxolo nokwala ukungawuthobeli umyalelo wakhe, okanye kukudutyulelwa ukusebenzela aba kumkani basemhlabeni nokubaxhasa, ngaloo ndlela uziqwabazel’ iliso iimfundiso zoKumkani wethu waseZulwini? Besiya kukhetha ukufa ngenxa yokuthembeka kuKumkani wethu waseZulwini.” Phezu kwaloo ngxelo ingacengi solalaphi, eli nqaku laqukumbela ngala mazwi: “Le asinto siyincomelayo, kodwa licebiso nje.”
6. Ufunde ntoni kumzekelo kaMzalwan’ uHerbert Senior?
6 Kwatsho kwathi qwenge kwabanye abazalwana ngalo mbandela baza bayilungela into eyayiza kwenzeka xa bengavumi ukuba ngamajoni. UHerbert Senior, ekuthethwe ngaye ngasentla, wathi: “Kum kwakungekho mahluko phakathi kokothula iimbumbulu enqanaweni [umsebenzi ekungaliwayo kuwo] nokuzihlohla kumpu ukuze udubule.” (Luka 16:10) Ngenxa yokuba isazela sakhe sasingamvumeli ukuba abe semkhosini, uMzalwan’ uSenior waphoswa ejele. Yena nabanye abazalwana aba-4 babephakathi kweqela lamadoda ayi-16, awayenezazela ezazingavumi ukuba abe semkhosini. Abanye yayingamadoda akhonza kwezinye iicawa, yaye elo qela lachitha inxalenye yexesha lalo kwintolongo yaseRichmond, eBritani, laza kamva laziwa ngokuba yiRichmond 16. Ngesinye isihlandlo uHerbert nawo onke amanye amadoda eli qela bakhweliswa enqanaweni ngokufihlakeleyo basiwa eFransi. Apho kwathiwa baza kudutyulwa. Bamiswa phambi kwamajoni aphethe imipu ukuze abadubule bafe. Sekunjalo, abazange badutyulwe. Isigwebo sabo sehliselwa kwiminyaka elishumi ejele.
“Ndaqonda ukuba abantu bakaThixo bafanele baphilisane ngoxolo nabantu, nokuba sele kukho izisongelo zemfazwe.”—USimon Kraker (Funda isiqendu 7)
7. Ngexesha lokuqhambuka kweMfazwe Yehlabathi II, yintoni ababesele becacelwe yiyo abantu bakaThixo?
7 Ngexesha lokuqhambuka kweMfazwe Yehlabathi II, bonke abantu bakaYehova babesele becacelwe gca koko kuthethwa kukungathath’ icala. Babengasayithandabuzi nendlela ekwakufuneka bawulandele ngayo umzekelo kaYesu. (Mat. 26:51-53; Yoh. 17:14-16; 1 Pet. 2:21) Ngokomzekelo, iMboniselo yesiNgesi kaNovemba 1, 1939, yayinenqaku elalibaluleke kakhulu elalinomxholo othi, “Ukungathath’ icala.” Eli nqaku lathi: “Ngoku abantu bomnqophiso kaYehova bamele balawulwe ngumthetho wokungakheth’ icala lalo naluphi na uhlanga olusemfazweni.” Ethetha ngelo nqaku, uSimon Kraker, owathi kamva wakhonza kwikomkhulu eBrooklyn, eNew York, wathi: “Ndaqonda ukuba abantu bakaThixo bafanele baphilisane ngoxolo nabantu, nokuba sele kukho izisongelo zemfazwe.” Loo mfundiso yeBhayibhile yafika ngexesha elifanelekileyo yaza yancenda abantu bakaThixo balungela ukuhlaselwa ngendlela abangazange bayibona ngaphambili ngenxa yokunyaniseka kuBukumkani.
8, 9. Sazaliseka njani isiprofeto sikampostile uYohane?
8 Umpostile uYohane waprofeta wathi emva kokuzalwa koBukumkani ngo-1914, inamba, uSathana uMtyholi, yayiza kuzama ukutshayela abaxhasi boBukumkani bukaThixo ngokukhupha umlambo wokomfuziselo emlonyeni wayo. * (Funda iSityhilelo 12:9, 15.) Sazaliseka njani esi siprofeto sikaYohane? Ukususela kwiminyaka yoo-1920 ukusa phambili, abantu bakaThixo batshutshiswa ngendlela engathethekiyo. Njengabazalwana abaninzi ababehlala kuMntla Merika ngexesha lemfazwe yehlabathi yesibini, uMzalwan’ uKraker waphoswa ejele ngenxa yokunyaniseka kwakhe kuBukumkani bukaThixo. Ngexesha lemfazwe, abona bantu baninzi ababevalelwe kwiintolongo zaseMerika ngenxa yokuba unqulo lwabo lungabavumeli ukuba balwe emfazweni, yayingamaNgqina kaYehova.
9 UMtyholi nabameli bakhe babezimisele ukwenza abalawulwa boBukumkani baphulukane nengqibelelo yabo enoba babehlala phi na. Kulo lonke elaseAfrika, eYurophu naseMerika, basiwa ezinkundleni nakwiikomiti zokuxolelwa kwamatyala. Bavalelwa ejele, babethwa bada balinyazwa ngenxa yokuba bengajiki kwisigqibo sabo. EJamani, abantu bakaThixo bafumana ingcinezelo engathethekiyo ngenxa yokuba babengavumi ukukhahlela uHitler okanye ukufak’ isandla kwimfazwe. Ngexesha lamaNazi, bamalunga ne-6 000 abavalelwa ezinkampini, yaye amaNgqina angamaJamani nangengawo, angaphezu kwe-1 600, afela ezandleni zabacinezeli. Sekunjalo, uMtyholi zange akwazi ukubacim’ igama abantu bakaThixo.—Marko 8:34, 35.
“WAFELA UKUZUKISA UTHIXO”
NGEXESHA lemfazwe yehlabathi yesibini, kwakukho iqaqobana lamaNgqina kaYehova kwiJamani yamaNazi. Umbhali-mbali uDetlef Garbe uthi nakuba kunjalo, “abaninzi kubantu ababebekw’ ityala lokungayi emfazweni ngenxa yesazela sabo ziinkundla zasemkhosini . . . kwiJamani yamaNazi yayingamaNgqina kaYehova.” Omnye waloo maNgqina yayinguGerhard Steinacher waseOstriya, owayeneminyaka eyi-19. Kwiintsuku ezimbalwa emva kweMfazwe Yehlabathi II, wabanjwa kuba engafuni ukuba semkhosini waseJamani.
NgoNovemba 1939, uGerhard wagwetyelwa ukufa. Kanye kuloo nyanga, esejele wabhala wenjenje: “Into endiyifunayo kukuzukisa uThixo nje kuphela, ukugcina imithetho yakhe, nokumcela ukuba asamkele kuBukumkani bakhe, apho siya kuphila ngoxolo singafi.”
NgoMatshi 29, 1940, ngaphambi kokuba abulawe, uGerhard wathetha la mazwi okugqibela kubazali bakhe: “Ndisengumntwana. Ndiya kukwazi ukuyimela iNkosi xa indipha amandla okwenjenjalo, yaye yiloo nto kanye endiyicelayo.” UGerhard wabulawa malunga nentsimbi yesithandathu ngentsasa elandelayo, mhlawumbi ngomatshini wokunqumla intloko. Kwingcwaba lakhe kubhalwe oku: “Wafela ukuzukisa uThixo.”
“Umhlaba” Uginya “Umlambo”
10. Ufuzisela ntoni “umhlaba,” yaye uye wangenelela njani ekuncedeni abantu bakaThixo?
10 Isiprofeto sikampostile uYohane sabonisa ukuba “umhlaba”—amaziko eli hlabathi aye aluncedo—wawuza kuwuginya “umlambo” wentshutshiso, ngaloo ndlela, unceda abantu bakaThixo. Siye sazaliseka njani esi siprofeto? Kumashumi eminyaka emva kweMfazwe Yehlabathi II, “umhlaba” ubusoloko ungenelela ekuncedeni abaxhasi abanyanisekileyo boBukumkani bukaMesiya. (Funda iSityhilelo 12:16.) Ngokomzekelo, iinkundla ezahlukahlukeneyo ezaziwayo ziye zakhusela amalungelo amaNgqina kaYehova okungavumi ukuba semkhosini nokufak’ isandla kwimibhiyozo yesizwe. Okokuqala, makhe sifunde ngezinye iindlela uYehova abancede ngazo abantu bakhe boyisa ekwenzeni iinkonzo zasemkhosini.—INdu. 68:20.
11, 12. Ngawaphi amatyala ababebekwa wona uMzalwan’ uSicurella noThlimmenos, ibe yaba yintoni imiphumo?
11 EMerika. UAnthony Sicurella wayengomnye wabantwana abathandathu abakhuliswa ngabazali abangamaNgqina. Wabhaptizwa eneminyaka eyi-15. Xa wayeneminyaka eyi-21, wabhalisa kwikomiti ebizela abantu emkhosini njengomshumayeli. Kwiminyaka emibini kamva, ngo-1950, watshintsha indlela abhalise ngayo, waza wazibhalisa njengongavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yesazela. Nangona ingxelo yeFederal Bureau of Investigation ingazange ibone nto imbi ngaloo nto, iSebe Lezobulungisa alizange liyamkele. Emva kokuquq’ ebuyelela ezinkundleni, iNkundla Ephakamileyo yaseMerika yaliphulaphula ityala likaMzalwan’ uSicurella yaza yangakwicala lakhe. Le miphumo yeli tyala yavul’ indlela yokuxoxwa kwamatyala abanye abantu baseMerika abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo.
12 EGrisi. Ngo-1983, uIakovos Thlimmenos wafunyaniswa enetyala lokungathobeli kuba engakhange avume ukunxiba iyunifomu yasemkhosini waza wagwetyelwa ukuya kuthothoza ejele. Akuba ekhululwe, wafaka isicelo somsebenzi wokuba ngumgcini weengxelo zemali, kodwa zange samkelwe kuba wayenengxelo yokuba wakha waphula umthetho. Waya kumangala, kodwa iinkundla zaseGrisi zamfumanisa enetyala, waza emva koko waya kumangala kwiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu (European Court of Human Rights [ECHR]). Ngo-2000, iijaji eziyi-17 zeBhunga Eliphakamileyo le-ECHR, zaba ngakwicala lakhe, ibe oko kwavul’ indlela yokuxoxwa kwamatyala ocalucalulo. Ngaphambi kwesi sigqibo, ngenxa yokuba bakha babanjelwa ukungathathi cala, abazalwana baseGrisi abangaphezu kwe-3 500 baba nengxelo yokwaphula umthetho. Emva kwesi sigqibo, iGrisi yawisa umthetho ocima loo ngxelo yolwaphulo-mthetho. Kwakhona, emva kokuhlaziywa koMgaqo-siseko waseGrisi, kwawiswa umthetho owawukhe wamiselwa kwiminyaka embalwa eyadlulayo, onika bonke abemi baseGrisi ilungelo lokwenza eminye imisebenzi xa besala ukuya emkhosini.
“Ngaphambi kokuba ndingene enkundleni, ndathandaza kuYehova, ndaza ndaziva ndiseluxolweni.”—UIvailo Stefanov (Funda isiqendu 13)
13, 14. Ziintoni onokuzifunda kumatyala kaIvailo Stefanov noVahan Bayatyan?
13 EBulgaria. Ngo-1994, xa uIvailo Stefanov wayeneminyaka eyi-19, wasiwa emfazweni. Wala ukuya emkhosini okanye ukwenza imisebenzi yasemkhosini engadibananga nokubulala. Wagwetywa iinyanga eziyi-18 ejele kodwa wabhena kuba wayenalo ilungelo lokungayi emkhosini ngenxa yesazela sakhe. Ekugqibeleni elo tyala ladluliselwa kwi-ECHR. Ngo-2001, ngaphambi kokuba lichotshelwe, kwathethathethwana noMzalwan’ uStefanov. Urhulumente waseBulgaria akazange akhulule uMzalwan’ uStefanov nje kuphela, kodwa wabangela ukuba nabo bonke abemi baseBulgaria ababengafuni ukuya emkhosini, kodwa bezimisele ukwenza eminye imisebenzi, bangabekwa tyala. *
14 EArmenia. Ngo-2001, uVahan Bayatyan kwanyanzeleka ukuba aye emkhosini njengoko yayingumthetho weli lizwe. * Ngenxa yesazela sakhe, akazange avume ukuya emkhosini kodwa ityala lamlahla kuzo zonke iinkundla zasekuhlaleni. NgoSeptemba 2002, wagwetywa iminyaka emibini enesiqingatha, kodwa wakhululwa emva kweenyanga ezilishumi elinesiqingatha. Kanye ngelo xesha, wabhena kwi-ECHR, yalichophela ityala lakhe. Noko ke, ngo-Oktobha 27, 2009, nakuloo Nkundla ityala lamlahla. Eso sigwebo sabatsho batyhafa abazalwana baseArmenia ababekule ngxaki. Noko ke, iBhunga Eliphakamileyo le-ECHR laphinda lasihlolisisa esi sigwebo. NgoJulayi 7, 2011, le Nkudla yamfumanisa engenatyala uVahan Bayatyan. Yayikokokuqala i-ECHR iqonda ukuba umntu ongavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe nangenxa yeenkolelo zakhe umele akhuselwe kuba elo lilungelo lakhe lokuvakalisa into ayicingayo ngokukhululekileyo, lesazela esikhululekileyo nelokunqula ngokukhululekileyo. Eso sigwebo sakhusela amalungelo amaNgqina kaYehova nabanye abantu abaninzi abakumazwe angamalungu eBhunga laseYurophu. *
Abazalwana baseArmenia bayakhululwa entolongweni emva kokuba i-ECHR ibafumanise bengenatyala
15. Yintoni ebangela ukuba abantu bakaYehova bangavumi ukungenelela imibhiyozo yesizwe?
15 Abantu bakaYehova abahlali bethembekile kuBukumkani bukaMesiya kumbandela wokwala ukuya emkhosini nje kuphela, kodwa abavumi nokungenelela kwimibhiyozo yesizwe. Ngokukodwa ukususela ngeMfazwe Yehlabathi II, kulo lonke ihlabathi abantu baye bathi phithi zizinto zobuzwe. Kuye kwafuneka abemi bamazwe amaninzi babonakalise ukuba bayawathanda amazwe abo ngokucengceleza isifungo, bacule umhobe wesizwe okanye ngokukhahlela iflegi yelizwe. Sekunjalo, thina sisa lonke olwethu uzuko kuYehova. (Eks. 20:4, 5) Ngenxa yoko, siye satshutshiswa ngendlela engathethekiyo. Nakuba kunjalo, uYehova uphinde wasebenzisa “umhlaba” ukuba uginye enye yaloo ntshuntshiso. Funda ngamanye amatyala uYehova aye wasebenzisa uKristu kuwo ukuze soyise.—INdu. 3:8.
16, 17. Liliphi ityala ababekwa lona uLillian noWilliam Gobitas, yaye yintoni wena oyifundileyo kwelo tyala?
16 EMerika. Ngo-1940, kwityala leMinersville School District nxamnye nabakwaGobitis iijaji eziyi-8 zeNkundla Ephakamileyo yaseMerika zathi la maNgqina kaYehova akwaGobitis anetyala, kodwa yaba nye kuphela eyayisithi akanatyala. ULillian Gobitas, * owayeneminyaka eyi-12, nomntakwabo uWilliam, owayeneminyaka eyi-10, babefuna ukuhlala benyanisekile kuYehova, ngoko abazange bavume ukukhahlela iflegi okanye ukucengceleza isifungo. Ngoko bagxothwa esikolweni. Ityala labo lasiwa kwiNkundla Ephakamileyo, yaza loo Nkundla yathi isikolo sasisenza into ekumgaqo-siseko eyayibonisa ukuba sithanda indlela “isizwe esimanyene” ngayo. Eso sigwebo seza neliza lentshutshiso kubantu bakaThixo. Abantwana abaninzi bamaNgqina bagxothwa esikolweni, abantu abadala baphelelwa yimisebenzi, yaye amanye amaNgqina amaninzi ahlaselwa ngamahlokondiba ngendlela emasikizi. Incwadi ethi The Lustre of Our Country ithi, “indlela awayetshutshiswa ngayo amaNgqina ngo-1941 ukusa ku-1943 yaba kukuqalisa kokunganyanyezelwa konqulo eMerika kuloo minyaka yoo-1900.”
17 Uloyiso lweentshaba zikaThixo lwaba lolwexeshana. Ngo-1943, iNkundla Ephakamileyo yaphinda yachophela elinye ityala elifana nelo labakwaGobitis. Eli lityala leWest Virginia State Board of Education nxamnye noBarnette. Kweli ityala, iNkundla Ephakamileyo yathi amaNgqina kaYehova akanatyala. Yayikokokuqala kwimbali yaseMerika iNkundla Ephakamileyo igweba ngendlela eyahlukileyo kwityala elifanayo ngexesha nje elifutshane. Emva kweso sigwebo, indlela ababetshutshiswa ngayo abantu bakaYehova eMerika yehla ngendlela engathethekiyo. Ngelo xesha, ukubaluleka kwamalungelo abo bonke abemi baseMerika kwacaca ngakumbi.
18, 19. UPablo Barros uthi wancedwa yintoni ukuze akwazi ukunyamezela, yaye abanye abakhonzi bakaYehova banokuwuxelisa njani umzekelo wakhe?
18 EArgentina. Ngo-1976 uPablo Barros owayeneminyaka esibhozo nomntakwabo uHugo owayeneminyaka esixhenxe, bagxothwa esikolweni ngenxa yokungavumi ukuphakamisa iflegi. Ngesinye isihlandlo, utitshalakazi omkhulu watshova uPablo waza wambetha entloko. Wathi ukuphuma kwesikolo omabini la makhwenkwe makashiyeke esikolweni kangangeyure, ezama ukuwanyanzela ukuba afak’ isandla kwimibhiyozo yesizwe. Ekhumbula loo ntlungu, uPablo wathi: “Ndandingasoze ndikwazi ukuyinyamezela loo ngcinezelo yokulahla ingqibelelo yam ukuba uYehova wayengazange andincede.”
19 Elo tyala lasiwa enkundleni, yaye ijaji yathi isigqibo esenziwe esikolweni sichanile, uPablo noHugo bafanele bagxothwe esikolweni. Noko ke, kwabhenwa kwiNkundla Ephakamileyo yaseArgentina. Ngo-1979 loo Nkundla yathi isigqibo senkundla yokuqala sasingachananga, yaza yathi: “Isohlwayo abasinikiweyo [sokugxothwa] sinxamnye nelungelo lomgaqo-siseko lokufunda (uMthetho 14) nomsebenzi kaRhulumente wokuqinisekisa ngemfundo yabasaqalayo (uMthetho 5).” Olo loyiso lwanceda abantwana bamaNgqina abayi-1 000. Abanye abazange babe sagxothwa yaye abanye, abafana noPablo noHugo, babuyiselwa esikolweni.
AmaNgqina amaninzi aselula aye athembeka nakubeni ayevavanywa
20, 21. Ityala likaRoel noEmily Embralinag lilomeleza njani ukholo lwakho?
20 KwiiPhilippines. Ngo-1990, uRoel Embralinag, * owayeneminyaka eyi-9 nodadewabo uEmily, owayeneminyaka eyi-10, kunye nabanye abafundi abangamaNgqina abasenokuba babeyi-66, bagxothwa esikolweni kuba bengavumi ukukhahlela iflegi. Utata kaRoel noEmily, uLeonardo, wazama ukuya kuthethathethana nabaphathi besikolo, kodwa zange aphumelele. Izinto zaya zisiba mbi, waza uLeonardo wamangala kwiNkundla Ephakamileyo. Wayengenamali yaye engenalo negqwetha lokummela, ngoko intsapho yakhe yathandaza icela ukhokelo kuYehova. Ngelo xesha, abantwana babegculelwa, behlekwa nokuhlekwa. ULeonardo wacinga ukuba wayengenakuphumelela kweli tyala kuba wayengazi nto ngomthetho.
21 Ekuhambeni kwexesha, le ntsapho yamelwa nguFelino Ganal, igqwetha elalikhe lasebenza kwenye inkampani yamagqwetha eyazenzela igama kwelo lizwe. Ngelo xesha, uMzalwan’ uGanal wayesel’ eyekile ukusebenza, ngoku eliNgqina likaYehova. Lakuba lixoxiwe eli tyala yiNkundla Ephakamileyo, zonke iijaji zema ngakwicala lamaNgqina zaza zathi abantwana mababuyiselwe esikolweni. Nakweli xesha, abo babezama ukuba abantu bakaThixo balahle ingqibelelo yabo kuye, batsho phantsi.
Ukungathathi Icala Kubangela Umanyano
22, 23. (a) Kutheni siye saphumelela kangaka kumatyala aliwa ezinkundleni? (b) Ukubona abazalwana abasehlabathini beseluxolweni kububungqina bantoni?
22 Kwakutheni ukuze abantu bakaYehova baphumelele kangaka kumatyala aliwa ezinkundleni? Nangona singengabo oosaziwayo, kodwa kumazwe ngamazwe nakwiinkundla ngeenkundla, iijaji ezikwaziyo ukuqiqa ziye zasikhusela kwiintlaselo nakubatshutshisi abangayekeleliyo. Ngenxa yethu, ziye zamisela nendlela omawubekwe ngayo umthetho womgaqo-siseko. Asiyithandabuzi into yokuba uKristu ebeyixhasa imigudu esiyenzayo ukuze siphumelele. (Funda iSityhilelo 6:2.) Kutheni sisilwa amadabi anje emthethweni? Asizimiselanga ukutshintsha umthetho. Kunoko, sizimisele ukuba siqhubeke sikhonza uKumkani wethu, uYesu Kristu, ngaphandle kweziphazamiso.—IZe. 4:29.
23 Kweli hlabathi lahlulahlulwe ziingxwabangxwaba zezopolitiko nelizaliswe yintiyo engathethekiyo, uKumkani wethu olawulayo uYesu Kristu, uye wayisikelela imigudu yabalandeli bakhe abasehlabathini yokungathath’ icala kwizinto zeli hlabathi. USathana akaphumelelanga kwiinzame zakhe zokusahlula nokusicim’ igama. UBukumkani buye bahlanganisa ndawonye izigidi zabantu ezingafuniyo ‘ukuphinda zilwe imfazwe.’ Kuyamangalisa ukubona abazalwana abasehlabathini beseluxolweni—akakho umntu onokubuphikisa ubungqina bokuba uBukumkani bukaThixo buyalawula!—Isa. 2:4.
^ isiqe. 4 Lo mqulu waziwa ngomxholo othi The New Creation. Kamva, imiqulu yeMillennial Dawn yabizwa ngokuba siStudies in the Scriptures.
^ isiqe. 8 Ukuze ubone indlela esixutyushwe ngayo esi siprofeto, funda incwadi ethi ISityhilelo—Incopho Yaso Ezukileyo Isondele!, isahluko 27, iphepha 184-186.
^ isiqe. 13 Isivumelwano sasifuna nokuba urhulumente waseBulgaria anike bonke abemi abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo eminye imisebenzi.
^ isiqe. 14 Ukuze ufumane ingxelo engakumbi, funda iMboniselo kaNovemba 1, 2012, iphepha 29-31.
^ isiqe. 14 Kwisithuba seminyaka eyi-20, urhulumente waseArmenia wavalela amaNgqina aselula angaphezu kwayi-450. NgoNovemba 2013 kwakhululwa abokugqibela kweli qela.
^ isiqe. 16 Igama lentsapho labhalwa ngendlela engachananga kwiingxelo zasenkundleni.
^ isiqe. 20 Igama lentsapho labhalwa ngendlela engachananga kwathiwa Ebralinag kwiingxelo zasenkundleni.
Buyinto Yokwenene Kangakanani UBukumkani Kuwe?
Unokusicacisa njani isizathu sokuba abantu bakaYehova bahlale bengathath’ icala kwezopolitiko?
Uloyiso lwasezinkundleni lukufundisa ntoni ngoBukumkani bukaThixo?
Unokubonisa njani ukuba uxhasa uBukumkani bukaThixo kuphela?
Bema Beqinile “Ngelixa Lovavanyo”
AmaNgqina KaYehova Awanikezeli Kwintshutshiso YamaNazi
Isikhumbuzo SaseSachsenhausen Sokukhumbula INgqina LikaYehova Elabulawa NgamaNazi